उच्च विकास पहिलो प्राथमिकता | कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक
As of 2013-05-20 13:36:10 ADBL 220 ( 50 ) ( -2 ) ALICL 211 ( 64 ) ( -11 ) ARUN 43 ( 40 ) ( 1.66 ) AXIS 72 ( 200 ) ( -1 ) BOK 610 ( 200 ) ( -1 ) BPCL 765 ( 100 ) (0) BSBL 130 ( 100 ) (0) CBBL 428 ( 10 ) ( 8 ) CBL 151 ( 133 ) ( 1 ) CDBL 172 ( 26 ) (2) CHCL 1,137 ( 16 ) (0) CNDBL 58 ( 80 ) (2) CTBNL 144 ( 54 ) ( -1 ) DDBL 340 ( 500 ) ( -5 ) EBL 1,535 ( 47 ) ( -10 ) GRAND 185 ( 54 ) ( -3 ) GSDBL 69 ( 11 ) ( -1 ) HBDL 56 ( 10 ) ( 1 ) JBBL 77 ( 30 ) ( -2 ) JBNL 171 ( 40 ) (3) KADBL 116 ( 90 ) (2) KAFIL 96 ( 48 ) ( -2 ) KDBL 73 ( 74 ) (3) KMBL 127 ( 10 ) ( 1 ) LBL 308 ( 1000 ) ( -2 ) LICN 1,105 ( 200 ) (4) LUBL 211 ( 85 ) ( -2 ) MBL 200 ( 116 ) ( -11 ) MFL 168 ( 200 ) (3) NABIL 1,740 ( 124 ) ( 14 ) NBB 300 ( 15 ) ( -18 ) NBF1 11 ( 300 ) ( -0.08 ) NCCB 211 ( 220 ) ( -2 ) NDFL 85 ( 20 ) ( 1 ) NGBL 123 ( 46 ) ( -2 ) NIB 715 ( 200 ) ( -7 ) NLBBL 314 ( 20 ) (6) NLIC 1,320 ( 57 ) (5) NTC 540 ( 100 ) (0) OFL 163 ( 10 ) ( -2 ) OHL 135 ( 60 ) (0) PCBL 337 ( 69 ) (5) PFC 202 ( 98 ) (3) PRFL 140 ( 100 ) (0) SANIMA 250 ( 115 ) ( -4 ) SBL 294 ( 210 ) (4) SCB 1,800 ( 57 ) ( 15 ) SIC 1,090 ( 200 ) ( 22 ) SICL 470 ( 200 ) ( -17 ) SRBL 218 ( 116 ) ( -1 ) SUBBL 98 ( 13 ) ( 1 ) SUPRME 70 ( 30 ) (0) SWBBL 335 ( 10 ) (6) TBBL 136 ( 35 ) (0) WDBL 80 ( 10 ) ( -1 ) कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक
उच्च विकास पहिलो प्राथमिकता
मिति: Tuesday,12th June 2012 22:53 PM
विश्वव्यापी धारणा कमजोर बनिरहेको छ, अर्थव्यवस्थाको गति मन्द बनेको छ र विदेशी पुँजी प्रवाहको गति पनि सुस्त छ । नीतिनिर्माताहरूदेखि लिएर उद्यमी–व्यवसायी तथा नागरिकहरू सबैले अर्थव्यवस्थालाई गतिशील तुल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । मुनाफास्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ ।
“मानिसहरूले भारतको लामो अवधिको विकास गाथाका विषयमा प्रश्न उठाउन सुरु गरिसकेका छन्.. केही समयमा लागि मानिसहरू हतास देखिन थालेका छन्,” मुडिजका एक विश्लेषकले भनेको यो कुरा अहिले विचारणीय बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०११–१२ को चौथो त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा कायम हुनासाथै देशको अर्थव्यवस्थामा एकदमै कठिन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रमाणितजस्तै भएको छ । यदि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा प्राथमिकताका साथ काम गरिएन भने मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस मुद्दामा हामी कुनै पनि किसिमका मतभेदहरूको सामना गर्न सक्दैनौं, न सरकारको स्वेच्छाचारी व्यवहारको न त त्यसको निष्क्रियताको नै । आर्थिक विकासका मामिलामा संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग)का सत्ता साझेदाहरूद्वारा उत्पन्न गराइएका अवरोधहरू र विपक्षीहरूको गैर जिम्मेवारीपनबाट समेत हामीले बच्नुपर्नेछ । यदि मतभेदको क्रम आउँदा दिनमा पनि जारी रहेमा भारत पनि ग्रिसकै मार्गमा त्रासदीपूर्ण भविष्यतर्फ उन्मुख हुने खतरा छ । यस परिस्थितिमा हामीले आफ्ना सम्मुख रहेका सबैभन्दा ठूला समस्याहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्नेछ । भारतीय मुद्रा (रुपैयाँ)को अवमूल्यन आर्थिक समस्याको प्रमुख लक्षण हो । रुपैयाँमा अचानक यति तीव्र गतिले गिरावट आउनुको कारण के हो र अवस्था अझ बिग्रेर जानु किन आशंका गरिरहिएको छ ? यसपछाडिका कारणहरू खोतल्ने हो भने विदेशी मुद्रा मुलुकबाट व्यापक अनुपातमा बाहिरिनु पनि एक कारण हो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, विदेशी पुँजी किन बाहिरिइरहेको छ त ? यसको जवाफमा के मात्र भन्न सकिन्छ भने कारोबारमा आएको कमीले मुनाफा घटाएका कारण यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो । यसको व्याख्या तल गरिनेछ ।
सन् २०११ अगस्टयता डलरको तुलनामा रुपैयाँको विनिमयदरमा २७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राका परिवर्तनीय ऋणपत्र र बाह्य व्यापारिक ऋण (एक्स्टरनल कमर्सियल बरोइङ्गस–ईसीबी) मा आधारित कम्पनीहरूको स्थिति बिग्रँदै गएको छ । यस्तो भुक्तानीका लागि ५.५ देखि ७ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान छ । युरो क्षेत्र र विश्वव्यापी स्तरमा बढ्दो खतरालाई मध्यनजर गर्दा बाह्य ऋणकोे नवीकरण केवल ती कम्पनीका लागि सम्भव हुनेछ, जसको स्थिति एकदमै सबल छ । यो समस्याबाट कसरी जुझ्ने हो भन्ने मूल प्रश्न छ । केही मानिसहरू रुपैयाँको अधिक मूल्यांकन भइसकेको थियो र निर्यातलाई सहयोग पु¥याउनका लागि पनि त्यसको अवमूल्यन आवश्यक भइसकेको तर्क गर्ने गर्छन् । निराशावादी बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउनु त्यति सहज काम होइन । केही मानिसहरू ईसीबीमा आधारित कम्पनीहरूलाई संरक्षण दिने कामलाई ‘घाटामा परिवर्तन ल्याउने’ प्रयासका रूपमा बुझ्ने गर्छन् । नीतिगत रूपमा लिइने निर्णयहरूको व्यापक प्रभाव हुन सक्छ, तर शुद्ध लाभले बढी महत्व राख्दछ ।
यो समयमा हामी घट्दो मुनाफाको समस्याको पनि सामना गरिरहेका छौं । विश्वव्यापी धारणा कमजोर बनिरहेको छ, अर्थव्यवस्थाको गति मन्द बनेको छ र विदेशी पुँजी प्रवाहको गति पनि सुस्त छ । नीतिनिर्माताहरूदेखि लिएर उद्यमी–व्यवसायी र नागरिकहरू सबैले अर्थव्यवस्थालाई गतिशील तुल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । मुनाफास्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ ।
सन् २०११–१२ को अवधिमा कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि तथा कम राजस्व वृद्धिका कारण कम्पनीहरूको मुनाफा स्तरमा नकारात्मक असर प¥यो । चौथो त्रैमासिकमा १ हजार ६६ कम्पनीहरूका सन्दर्भमा उच्च ब्याजदर लागत खुद मुनाफाको ३१ प्रतिशत थियो, जबकि ठीक अघिल्लो वर्षको समान अवधिमा यो त्यसको २२ प्रतिशत बराबर रहेको थियो । यी कम्पनीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने सामेल छैनन् । यस्तै २ हजारभन्दा अधिक कम्पनीहरूका लागि ब्याजदर लागत ४२ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यसरी उच्च ब्याजदर र पुरातन विचारमा आधारित बजेट प्रणालीले कम्पनीहरूको मुनाफा दरमा नकारात्मक असर पा¥यो । यसमाथि सरकारको निष्क्रियताले झन् बढी नकारात्मक भावनाको सञ्चार गरिदियो । भोडाफोनको कर प्रकरणले आगोमा घ्युको काम गरिदियो । यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कर नीतिमा परिर्वतन गर्न दिएको आदेशले सरकारलाई झस्क्याइदिएको छ ।
मुनाफामा व्यापक रूपमा आइरहेको कमीकै कारण विदेशी पुँजी बाहिरिन सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ । रुपैयाँको मूल्यमा आएको गिरावटले यो अनुपातलाई अझ बढायो, किनकि आयात महँगो हुन पुग्यो । विशेष गरी तेल, सुन र कोइलाको आयात महँगिन पुग्यो । तेल र सुनको आयात उच्चदरमा बढेको थियो नै, स्थानीय उत्पादनमा आएको गिरावटले कोइलाको आयात पनि बढ्यो । यसपछि सेयरको मूल्यमा आएको गिरावट र अस्थिर नीतिहरूले पुँजी बाहिर जाने गतिलाई अझ बढी तीव्र बनाइदियो । यसले रुपैयाँमाथिको दबाब अझ बढाउनमा बल पु¥यायो । यद्यपि यसका पछाडि केही अन्य कारण पनि छन् ः
–बढ्दो माग र अवरुद्ध आपूर्तिका बीच असन्तुलनका कारण महँगीमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया–आरबीआई) ले यससँग जुझ्नका लागि ब्याजदरमा वृद्धि त गरेको छ, तर समस्या सुल्झिनुका सट्टा उल्टै बल्झिँदै गइरहेको छ । किनकि यसका कारणले लगानी र नाफामा कमी आउन थालेको छ । यसबीच राज्य तथा केन्द्र सरकारहरू आपूर्तिको समस्यालाई समाधान गर्न विफल रहे, जसका कारणले गर्दा समस्या अझ चर्कंदै गयो ।
– नीतिगत रूपमा व्याप्त अस्थिरता र मनपरितन्त्रको वातावरण ठीक त्यस्तै छ, जस्तो गल्ती ब्राजिलले ७० को दशकमा गरेको थियो । यो गल्ती हो¬– विकासको सुनिश्चितता नभईकनै यावत् योजना थालनी गरिनु । भोडाफोन कर प्रकरणमा भारतीय नीतिनिर्माताहरूको यो मनपरीतन्त्रलाई महसुस गर्न सकिन्छ ।
– पंगुपन भन्नुस् या अक्षमताको उदाहरण हाम्रासामु पर्याप्त छन् । कोइला आपूर्ति सुनिश्चित नभएका कारण विद्युत् उत्पादन संयन्त्रहरूले यसको मोल तिर्नुपरिरहेको छ । विद्युत् वितरण र त्यसको शुल्क दर अव्यावहारिक भइरहेका छन् । नयाँ विद्युत् उत्पादन संयन्त्रले क्षमताअनुसार काम गर्न पाइरहेका छैनन् । दूरसञ्चार र स्पेक्ट्रमका मुद्दाहरूमा रचनात्मक निर्णय लिइरहिएको छैन । खुद्रा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआ9Aापदार्थको मूल्य घट्नेछ र लागत खर्चलाई कम गराउनेछ, साथसाथै व्यावसायिक मनोबल पनि बढाउनेछ । यस्तो मनोबललाई लगानी सुधारका लागि उपयोग गर्नु आवश्यक छ । केही मानिसले ब्याजदरमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्, तर यस्तो अवस्थामा यो उचित कदम हुने छैन, किनकि यसले मुनाफाको अनुपातमा ब्याजदरको लागत बढाई खुद मुनाफा दरमा यसको असर पार्नेछ । अर्को, सरकार आफंैले तत्काल यस्ता संकेतहरू दिनु आवश्यक छ कि ऊ करसम्बन्धी सबै स्वेच्छाचारी कदमलाई अन्त्य गर्न गइरहेको छ । यसपछि दूरसञ्चार नीति, इन्धन आपूर्ति, भूमि अधिग्रहणलगायत जटिल मुद्दाहरूसँग जुझ्न व्यवस्थित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी मुद्दाहरू लामो समयदेखि विलम्बित भइरहेका छन्, यही कुरा ऊर्जा क्षेत्रका हकमा पनि लागू हुन्छ ।
यसको सम्बन्ध सुरुवाती समस्याहरूका परिचायक बनिसकेका दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारबाट हुन सक्छ । मन्त्रीहरूको अधिकारप्राप्त समूहले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अल्पावधिका लागि सरकारी राजस्वमा विचार गर्न सक्छन्, ताकि आउँदा दिनहरूमा सरकारका लागि अधिक राजस्व प्राप्तिको मार्ग सहज होस् ।
(पोनप्पा, व्यवस्थापन परामर्शदाता हुन्, साभार ः बिजनेस स्ट्यान्र्डर्ड)
तरलता समस्याको समाधान : ब्याजदर करिडोर मूल्यवृद्धिका व्यावहारिक पक्ष विकास–निर्माणका प्रतिनिधि समस्या सुनसँग जोडिएका सत्य समस्याग्रस्त संस्था र केन्द्रीय बैंकको नीति रेमिट्यान्स र खाद्यान्न असुरक्षाको अन्तरसम्बन्ध बन्द–हड्तालको मारमा औद्योगिक क्षेत्र निकासी प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान सहकारी संस्थाहरूलाई आयकर छुट सम्बन्धित सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार २०६९ साल पुस मसान्तसम्म नेपालमा जम्मा
व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्यको दायित्वबोध बजार अर्थनीतिबाट भाग्दै निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रमा सुधारका केही उपाय लेखापरीक्षकका पेसागत मुद्दाहरू शाही आयोग, लोकमान र भ्रष्टाचार न्यूनतम पारिश्रमिक र निजी क्षेत्रको मनोदशा अर्थतन्त्रमा कमजोर सरकारी भूमिका व्यावसायिक सहजताका लागि विद्युतीय पोर्टल निर्वाध व्यापारमा गैरभन्सार अवरोध सामाजिक सञ्जालको बढ्दो भूमिका राजनीतिकै कारण खस्कदो अर्थतन्त्र श्रमिक र पुँजीपति वर्गको नेपाल सन्दर्भ निजी क्षेत्रकै निजीकरण गर्ने कि ? बूढीगण्डकी आयोजनाले पलाएको आशा आफ्नै भूमिकामा अन्योलग्रस्त राष्ट्र बैंक परिसूचक